"The Great Porn Experiment" ၏ Transcript - TEDx Glasgow (2012) - Porn ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ကနေဒါသုတေသီရှိမုန် Lajeunesse ကယောက်ျားလေးအများစုသည်အသက် ၁၀ နှစ်တွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေကြသည်။ အသုံးပြုသူများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအတိတ်ကညစ်ညမ်းမှုများထက် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။ အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့? အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်း။
ဒီexperimentစတြေးလျစမ်းသပ်မှုကနေသင်မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါကအာဟာရသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး သစ်ခြင်း ကြောင်းနှိုးဆော်ခြင်းတဟုန်ထိုးပို့ပေးသည် ဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ ၂၂ ခုကိုကြည့်ရန်။ ဒီဆူးကိုတွေ့လား ထိုနေရာသည်သုတေသီများသည်ယောက်ျားများမမြင်ဖူးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသို့ကူးပြောင်းသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ရလဒ် - ဘာသာရပ်တွေရဲ့ ဦး နှောက်နဲ့အူနံပါတ်တွေထွက်လာတယ်။
အဘယ်ကြောင့်အားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားမှု? (သိုးနှင့်လျှော။ ) မိခင်သဘောသဘာဝသည်တောင့်တင်းသောမိန်းမများကိုမျိုးပွားရန်အထီးကိုယောက်ျားများကြိုက်နှစ်သက်သည်။ သိုးတစ်ကောင်သည်သိုးဟောင်းနှင့်အတူမိတ်ရန်အချိန်ပိုလိုသည်။ သို့သော်သင်အမျိုးသမီးများအားပြောင်းနေပါကသူသည်အလုပ်ကိုနှစ်မိနစ်အတွင်းလုပ်နိုင်ပြီးသူလုံးဝမောပန်းပြီးသည်အထိဆက်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို "Coolidge effect" ဟုလူသိများသည်။ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ။
ဒီအဟောင်းကိုနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေအစီအစဉ်ကလူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်အသစ်တွေကိုသူရဲ့မျိုးဗီဇကိုဖြတ်သန်းဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ်ရည်းစားထားတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ဖန်သားပြင်ကိုအသားကျအောင်နေစေရန်သူ၏ ဦး နှောက်က“ သွားယူပါ” လွှတ်လိုက်သည်။ အာရုံကြောဓာတု dopamine တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုပုံသို့မဟုတ်မြင်ကွင်းတစ်ခုပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ထိုသိုးယာလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်နေသမျှကာလပတ်လုံးယောက်ျားတစ်ယောက်ကလစ် နှိပ်. ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်သကဲ့သို့, သူသွားပေါ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် - ဒါသည်သူ၏ dopamine မည်။ မိမိအမုဆိုးစုဆောင်းဘိုးဘေးတို့အများအပြားဘဝသက်တမ်းအတွက်တတျနိုငျသထက်အင်တာနက်ကို porn နှင့်အတူယောက်ျားတစ်ယောက်ဆယ်မိနစ်တွင်ပိုမိုပူပြင်းတဲ့သူငယ်တွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါပြဿနာကိုကျွန်တော်တစ်ဦးမုဆိုးစုဆောင်းဦးနှောက်ရှိသည်ဖြစ်သည်။
အင်တာနက် porn သည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကြီးမားသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူ ဦး နှောက်သည်သူ၏ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်အရာအားလုံးအပေါ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုဂရုတစိုက်ကြိုးကိုင်ထားသည်။ တစ်ယောက်တည်းနေခြင်း၊ Voyeurism၊ နှိပ်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ အကွက်များစွာ၊ အမြဲတမ်းအသစ်အဆန်း၊ လူငယ်တစ် ဦး က“ ကျွန်တော်တို့ဟာလက်ဝှေ့ထိုးတတ်တဲ့ပထမမျိုးဆက်လား” ဟုမေးခဲ့သည်။
ရီးရဲလ်လိင်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ဖြစ်ပါသည်: ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူပိုးပန်း, ထိ, ထိမိခံရ, အနံ့, pheromones, Less မာန်ဆွ, စိတ်ခံစားမှုဆက်သွယ်မှု, Interaction ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်လေးနောက်ဆုံးတွင်အမှန်တကယ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူရရှိသွားတဲ့တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားမလဲ
ကောင်းပြီ, သုတေသီများအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်းအများကြီးမသိ - အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Lajeunesse သည်အသုံးပြုသူများအပေါ်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်ကြိုးစားသောအခါကောလိပ်အရွယ်အသက်အရွယ်ယောက်ျားများကိုသူမသုံးခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးအလေးအနက်ထားတဲ့အကြပ်အတည်းကတော့လေ့လာမှုမှာထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့မရှိဘူး။ ဤသည်ကြီးမားတဲ့မျက်စိကန်းသောအစက်အပြောက်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ယောက်ျားအားလုံး ၁၀ နှစ်အရွယ်မှာအကြီးအကျယ်ဆေးလိပ်သောက်တာကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ ပြီးတော့မသောက်တဲ့အုပ်စုမရှိဘူး။ ယောက်ျားတွေအတွက်အဆုတ်ကင်ဆာကပုံမှန်လို့ထင်တယ်။
Lajeunesse ကကျောင်းသားများအား“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကမင်းကိုမင်းမိန်းမတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့သင့်ရဲ့သဘောထားကိုထိခိုက်နေသလား” ဟုမေးခဲ့သည်။ သူတို့၏အဖြေကားအဘယ်နည်း။ “ ဟင့်အင်း၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ကြာအောင်အသုံးချနေခဲ့တာကြာပြီ။ ဒါကရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာထင်သလဲဆိုတာကိုငါးကိုမေးမြန်းတာနဲ့တူတယ်။
၎င်းသည်ဒုတိယပြproblemနာကိုဖြစ်စေသည်။ သုတေသီများက Zimbardo တွင်ဖော်ပြထားသောရောဂါလက္ခဏာများအကြောင်း porn အသုံးပြုသူများအားမမေးမြန်းပါ ယောက်ျားများ၏နိဂုံးကို [ကို TED ဟောပြောပွဲ] ။ “ Arousal စွဲ” လက္ခဏာများသည်အခြားအခြေအနေများဖြစ်သည့် ADHD၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှု၊ OCD စသည်ဖြင့်အလွယ်တကူမှားယွင်းနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကဤအခြေအနေများသည်အဓိကအားဖြင့် - စွဲလမ်းမှု၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆသော်လည်း၊ ရလဒ် စွဲလမ်း၏။ အကျိုးဆက်အဖြစ်, သူတို့ကအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းမပြုဘဲ, ဤယောက်ျားတွေ medicate ။ ဒါကြောင့်များစွာသောယောက်ျားတွေသူတို့အပြုအမူကိုပြောင်းလဲနေဖြင့်မိမိတို့၏ရောဂါလက္ခဏာတွေ reverse နိုင်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါဘူး။
တတိယအနေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရလိင်လှုပ်ရှားမှုကစွဲလမ်းစေနိုင်တယ်လို့မယုံနိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့“ လိင်သည်ကျန်းမာတယ်။ ” သို့သော်ယနေ့အင်တာနက်၏ညစ်ညမ်းရုပ်သည်လိင်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်“ World Of Warcraft” သည်စစ်မှန်သောလိင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ မျက်နှာပြင်အပြည့်အ ၀ မရှိသောခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လူတစ်ယောက်အားနှိုးဆွစေသောစွဲခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ဒီဒတ်ခ်ျလေ့လာမှုကအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုအားလုံး - ညစ်ညမ်းသည်စွဲလမ်းနိုင်သည့်အလားအလာအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်
ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်ပါပဲ။ ဤသည်ရှေးဦးနှောက် circuit ကိုအစားအစာ, လိင်နှင့် Bond ဆီသို့ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းထုတ်ရန်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ်, အဆိုပါသဘာဆုလာဘ်၏အစွန်းရောက်ဗားရှင်းထူးခြားတန်ဖိုးရှိသောအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်။ ဒါကကျနော်တို့က high-ကယ်လိုရီအစားအစာနှင့်ဝတ္ထုပူသူငယ်အဘို့အပို dopamine ရဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံ dopamine ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝအ satiation ယန္တရားများထပ်ရေးနိုင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်ကြွက်များကိုအစာစားရန်အတွက်ကြွက်များကိုအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး၎င်းတို့အားလုံးနီးပါးသည်အဝလွန်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်လည်းအမေရိကန်လူကြီး ၅ ယောက်မှာ ၄ ယောက်ဟာအဝလွန်နေပြီးတစ်ဝက်ဟာအ ၀ လွန်ပါတယ်။ သဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မတူဘဲအရက်နှင့်ကိုကင်းကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးသည်သုံးစွဲသူများ၏ ၁၀-၁၅% ကိုသာလူနှင့်ကြွက်များကချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
အစားအစာနှင့်လိင်အတွက်ဤ“ မူးယစ်ဆေးဝါးယန္တရား” သည်တစ်ချိန်ကဆင့်ကဲပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား“ အဆင်ပြေနေစဉ်၎င်းကိုရယူနိုင်ရန်” ကူညီသည်။ လူသတ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်အသား ၂၀ ပေါင်ထုတ်ထားသောဝံပုလွေများကိုစဉ်းစားပါ။ ဒါမှမဟုတ်မိတ်လိုက်ရာသီရောက်ပြီ၊
အဘယ်အရာကိုမိတ်လိုက်ရာသီကုန်ဆုံးဘယ်တော့မှဆိုရငျကော dopamine အားလုံးသည်သူတို့အား hits2အမှုတို့ကိုပြု:
ပထမဦးဆုံးသူတို့သင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ထီပေါက် hit င့်ကြောင့်သင့်ဦးနှောက်ပြောပြပါ။
ဒုတိယအချက်, (အလွန်အရေးကြီးပါသည်) သူတို့ချေါတဲ့မော်လီကျူး switch ကိုဖြစ်ပေါ် ...
DeltaFosB - သင့် ဦး နှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်ပတ်လမ်းမှာစုဆောင်းမိလာတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကိုအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းဖြင့်ဤ DeltaFosB (ဦး နှောက်ကိုစတင်ပြောင်းလဲလာသည်) သည်ဤအစုအဝေးသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်တွန်းအားကိုတိုးပွားစေသည်။
အဆိုပါ Bing ဆက်လက်ဆိုပါကအားလုံးစွဲတွင်တွေ့မြင်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည်
ရိုးရှင်းသောစွဲလမ်းမှု၏ dominoes များမှာ - အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ dopamine ပိုလျှံမှုသည် DeltaFosB သို့ ဦး တည်သွားသည် >>> စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး စွာနံပါတ်တပ်ထားသောအပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှုကိုစတင်သည် - ဒါကြောင့်နေ့စဉ်အပျော်အပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲသူကိုမကျေနပ်စေ (desensitization) ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုသူ့ကို Hyper-reactive porn (ထိခိုက်လွယ်) မှပါစေ။ သူ၏အသက်တာအတွက်အခြားအရာအားလုံးပျင်းစရာကောင်းပုံရသည်, ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းတကယ်ကသူ့ဆုလာဘ် circuit ကိုတက်မီး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကသူ့ willpower erodes - သူ့ဦးနှောက်၏ CEO ဖြစ်သူသည်တိုကျရိုကျ cortex, ဘယျလိုမှမဖြစ်လာအဖြစ်။
ငါလုံလုံလောက်လောက်ဒီအလေးပေးလို့မရပါဘူး: စွဲအားလုံးသည်ဤတူညီသောအာရုံကြောအခြေခံအုတ်မြစ်အတူတူနှင့်အတူတူမော်လီကျူး switch ကို - DeltaFosB အားဖြင့်အစပျိုးနေကြသည်။
ဘယ်လိုနောက်ခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုသိပ္ပံပညာရှင်များတိုင်းတာသလဲ? အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများဦးနှောက် Scan ဖတ်။ ဤရွေ့ကားအထူးသဖြင့် Scan ဖတ်မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်လျှော့အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှုပြသပါ။ ဤရွေ့ကားနှင့်အခြားပြောင်းလဲမှုများကိုလည်းအလွန်မကြာသေးမီကဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလောင်းကစားစွဲ, အစားအစာစွဲတွင်တွေ့မြင်နှင့်ပြီ။
ယခုမှာ, အင်တာနက်စွဲပါ။ ကျွန်မဦးနှောက်ကိုလေ့လာမှုများနှင့်အတူဆလိုက်ဖြည့်ဆည်းဘို့တောင်းပန်ပါတယ် - ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကိုသူတို့တည်ရှိနေကိုသိလိုကြသည်။ ရုံရက်စွဲများသတိထားမိ - ဤသတင်းစာကိုချွတ်ပူဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိအားလုံးတစ်ဦးတည်းသာဦးတည်ချက်အတွက်ဦးနှောက်သုတေသနအချက်များကို: constant အသစ်အဆန်း-မှာ-a-click နှိပ်ပြီးစွဲစေနိုင်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ယခင်အင်တာနက်ကိုစွဲလေ့လာသည့်အခါဤဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့နောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ကြသောကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့သိကြ၏။ ကံမကောင်းစွာပဲအဲဒီလေ့လာမှုများအဘယ်သူအားမျှအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအ-ပေမယ့်ခွဲထုတ်သူတို့ပါဝင်သည်လုပ်ပါ။
ဒီနေရာမှာဂိမ်း changer ... ။
နောက်ဆုံးမှာကျနော်တို့မရှိတော့အင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုနေသူကိုယောက်ျားတွေအုပ်စုများရှိသည်။ ဒါအမှန်ပဲ။ မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများကိုဆန္ဒအလျောက်ထောင်ပေါင်းများစွာကတက်ပေးခြင်းနေကြသည်။ ဤရွေ့ကားယောက်ျားတွေအကြီးအညစ်ညမ်းစမ်းသပ်မှုအတွက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ "ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကို" ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကတဦးတည်း variable ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ပညာရှင်တွေရဲ့ဖေါ်ပြခြင်းပါပဲ။
ဒါဟာငါဆက်မသွားမီ "။ ယောက်ျားတွေ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း" ဟုဖွင့်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းလက်ျာစိတျထဲတှငျမဆို porn-မေတ္တာရှင်ကောင်လေးကအရှုံးမပေးမယ်လို့အဘယ်ကြောင့်သိလို။ စကားလုံးနှစ်လုံး:
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ "အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းလူပျိုတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသတ်ဖြတ်နေပါတယ်။ " Zimbardo ပြောခဲ့သကဲ့သို့, "လူငယ်ယောက်ျားတွေမိန်းမနှင့်ထွက်လျှံနေကြတယ်။ " အီတလီဆီးရောဂါပါရဂူများကဒီစစ်တမ်းကိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကျော်မျက်မြင်အရာကိုအတည်ပြု။
လိင်မှုမြှင့်တင်ရေးမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ဤယောက်ျားများအတွက် (သူတို့လုပ်ခဲ့လျှင်) မကြာခဏအလုပ်မလုပ်တော့ပါ၊ အကြောင်းမှာသူတို့၏ Viagra သည် Viagra လည်ပတ်နေသည့်ခါးပတ်အောက်တွင်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ပြproblemနာသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝဓါတုဗေဒဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကြောင့် - စွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့နံပါတ်တွေ ဦး နှောက်ကသူတို့ရဲ့အားနည်းနေတဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသူတို့ရဲ့ငှက်ပျောသီးဆီကိုပို့နေတယ်။
Dr. Foresta ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း -“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်တုံ့ပြန်မှုနိမ့်ကျခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ထိုအခါယေဘူယျအားဖြင့် libido တွင်ကျဆင်းသွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်စိုက်ထူရန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ”
3 ယူ-Away ဒီကနေ:
အကျိုးကိုဆားကစ်၏တဖြည်းဖြည်းချင်း desensitization: ပထမဦးဆုံး Foresta တစ်ဦးဂန္စွဲဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြနေသည်။
ဒုတိယအချက်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပလေးဘွိုင်ထံမှသှေးကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျယ်ပြန့်, နုပျို ED မတိုင်မီမြင်ကြဖူး။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ED သည်ဤယောက်ျားများကိုအာရုံစိုက်စေသည့်တစ်ခုတည်းသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ မေးခွန်းမှာ“ သူတို့ဘာတွေသိသာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေပျောက်နေတာလဲ။ အများစုကသူတို့ထွက်သွားပြီးနောက်သည်အထိထွက်တွက်ဆကြဘူး။
နှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ကျော်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် \_ t
ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်ကစိတ်ပညာရှင်များနှင့်စိတ်ရောဂါကုသသူများထံရောက်ရှိခဲ့သည်။ စိတ်ကျရောဂါ၊ ပြင်းထန်သောလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်၊ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှုနှင့်အခြားသူများအားရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည်။ Effexor, Ritalin, Xanax နှင့် Paxil တို့ကိုကြိုးစားပြီးစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောကောလိပ်များထဲကကျဆင်းခဲ့သည်။ နှစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့သည် ငါ၏အလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတည်ငြိမ်အောင်အိုးတလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးအနည်းငယ် (အသွင်အပြင် / အခြေအနေအရခန့်မှန်းရသည်) ၏ချဉ်းကပ်မှုကိုခံရသော်လည်းကျွန်ုပ်၏မယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းမှုကြောင့်သူတို့လျင်မြန်စွာထွက်ပြေးခဲ့သည်။ ၁၄ နှစ်မှစ၍ ငါဟာအသည်းအသန်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လုံးလုံးငါစမ်းသပ်နေပြီး၊ ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်လလုံးဝရပ်တန့်။ ဒါဟာအလွန်ခက်ခဲခဲ့ပေမယ့်ယခုအချိန်အထိမယုံနိုင်လောက်အောင်ထိုက်တန်။ ကျန်တဲ့ဆေးကိုငါဖြတ်လိုက်ပြီ။ ”
"ကျွန်မရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံများသည်သူတို့အရင်ကထက်ပိုမိုပြတ်သားသည်။ ငါဟာကြီးမားသောသံလိုက်ကဲ့သို့ခံစားရတယ်။ ငါ့ရဲ့ ED လည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ငါတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့ရသည် - ငါဘဝမှာဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးပဲ။
ဒါကြောင့်ယောက်ျားတွေရဲ့အိတ်ကပ်တွေဟာ ၀ က်ဘ်ပေါ်ကနေပေါ်ထွက်လာတာပါ။ အမျိုးသားများစုဝေးရာနေရာများတွင်၊ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သည့်နေရာများတွင်ရွေးသူ - အနုပညာရှင်နေရာများ၊ အားကစားဆိုဒ်များရှိသည်။ သူတို့သည်အာရုံကြောဓာတုပြန်လည်မွေးဖွားမှုကိုရှာဖွေနေကြသည်။ ဤတွင် Reddit.com မှအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုယ်သူတို့“ fapstronauts” ဟုခေါ်သည်။ “ Fapping” ဆိုတာကတစ်ကိုယ်တော်လိင်အတွက်ဘန်းစကားဖြစ်တယ်၊ လွန်ခဲ့သောတစ်လကဤပုံကိုရိုက်ကူးချိန်မှ စ၍ အဖွဲ့ဝင် ၂၀၀၀ ကိုသူတို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
porn ထံမှ unhook ဖို့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကြီးထွားလာနေပါတယ်။ တကယ်တော့အုပ်စုများဝဘ်ဖြတ်ပြီးတက်လာကြသည် ... ဥရောပမှာလွန်း။ ဒါပေမယ့်နံ့သာအတွက်ထူးထူးဆန်းဆန်းယင်ကောင်ရှိပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အတွက်ယောက်ျားတွေအဖြစ်လျင်မြန်စွာအဟောင်းတွေယောက်ျားတွေအဖြစ် erectile ကျန်းမာရေးပြန်ကြသည်မဟုတ်။ ဘယ်လို 50 နှစ်အရွယ်ကျောပိုမြန်တဲ့ 20-တစ်ခုခုထက်ကသူ့ Mojo ရနိုင်မလဲ? အဖြေ: အဟောင်းတွေယောက်ျားတွေဝေးတော့ဘူး porn ကိုအသုံးပြုသော်လည်း, သူတို့သည်ယနေ့ highspeed အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဒီ key ကို variable ကိုသိ - အဟောင်းများကိုအသုံးပြုသူများသည်တိုင်အောင်အညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများမဖွံ့ဖြိုးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကိုရပြီးတဲ့နောက်.
သူတို့ရဲ့ဦးနှောက် dopamine ထုတ်လုပ်မှုနှင့် neuroplasticity သူတို့ရဲ့အထွတ်အထိပ်ရောက်နေချိန်တွင်ယနေ့ငယ်ရွယ်ဆယ်ကျော်သက်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစတင်ပါ။ သူတို့စွဲဖို့အန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်သည့်အခါဤသည်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အခြားအန္တရာယ်ရှိပါတယ်:
ဆယ်ကျော်သက်များသည်အရွယ်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှအကြီးအကျယ်အသုံးပြုသောဆားကစ်များကိုခိုင်ခံ့စေပြီးအသုံးမပြုရသေးသောသူများကိုပြန်ခုတ်ယူသည်။ ဒါကြောင့်အသက် ၂၂ နှစ်လောက်မှာယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာဟာသူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာနက်ရှိုင်းစွာရှုပ်နေသလိုပဲ။ ၎င်းသည်အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်မကိုက်ညီသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသို့ကူးပြောင်းလျှင်၎င်းသည်ထိတ်လန့်စရာဖြစ်စေနိုင်သည် ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဦး နှောက်ဟာပလပ်စတစ်ဖြစ်ပြီးယောက်ျားတစ်ယောက်ကရုပ်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်အရသာပြန်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
ယောက်ျားတစ် ဦး သည်ပုံမှန်ခံစားချက်များကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါသူ၏ ဦး နှောက်သည်ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြားရသောအရာနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
"ကျွန်မနောက်တစ်ကြိမ်ဆာအိုင်းဇက်နယူတန်သို့မဟုတ် Leonardo da Vinci ၏တူခံစား!
ငါတစ်လအကြာကနုတ်ထွက်ခဲ့ကတည်းကငါစာသားအတိုင်း: စီးပွားရေးတစ်ခုစတင်, စန္ဒယားကိုယူ။ , နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြင်သစ်လေ့လာနေ, ပရိုဂရမ်းမင်းရေးဆွဲခြင်း, စာရေးခြင်း, ငါ့ဘဏ္ancesာရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း, ငါနှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းသိထက်ပိုပြီးကြောက်မက်ဘွယ်သောအတွေးအခေါ်များရှိသည်, ။ ကျွန်မရဲ့ယုံကြည်မှုကကောင်းကင်မြင့်တယ် ငါမဆိုမိန်းကလေးနှင့်စကားပြောနိုင်တူသောငါခံစားရတယ်။ ငါကောလိပ်တက်ဖို့ ၂ နှစ် ၁ နှစ်ခွဲလောက်အချိန်ယူခဲ့ရပြီးစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကြောင့်ငါတူပဲကောင်လေးပါ။
စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ ဇင်ဘာဒါရဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်သူတွေဟာထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကိုနိုးကြားစွဲလမ်းမှုအကြောင်းသင်ကြားပေးနေတာကိုကျွန်တော်မြင်ချင်ပါတယ်။ အဲဒါကနေလွတ်မြောက်ခြင်းပါ။